Cuntooyinka Dugsiga Bilaashka ah - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-La'aanta
Dugsiyada Oregon waxay siiyaan nafaqo muhiim ah boqollaal kun oo arday sannad kasta.
In ka badan 300,000 oo carruur ah ayaa u qalma cunto bilaash ah ama qiimo jaban iyada oo loo marayo Barnaamijka Quraacda Dugsiga iyo Barnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka, laakiin in ka yar kala badh ardayda xaqa u leh ayaa ka qaybqaata. Ilmahaagu ma maqan yahay? Helitaanka cunto wanaagsan, nafaqo leh ayaa lagama maarmaan u ah ardaygaaga si uu u yeesho tamar, si cad u fekero, oo uu awood u yeesho inuu diirada saaro hawlaha maalinta dugsiga. Had iyo jeer waa mudan in la hubiyo in qoyskaagu u qalmo quraac iyo qado bilaash ah.
Ardaygaygu ma u qalmaa?
Waa muhiim inaad buuxiso arjiga cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban ee ilmahaaga ama carruurtaada maadaama qoysas badani u qalmaan ama laga yaabo inay dhowaan u qalmaan haddii dakhligaagu isbeddelo wakhti kasta inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Xitaa haddii aadan hubin u-qalmitaankaaga USDA waxay u soo celisaa dugsiyada kharashka DHAMMAAN cuntooyinka oo leh heerar kala duwan oo ku xiran u-qalmitaanka, u oggolaanaysa barnaamijku inuu u shaqeeyo dhammaan ardayda.
Ka hooseeya 300% heerka saboolnimada federaalka
Haddii dakhliga qoyskaagu uu ka hooseeyo 300% Heerka Saboolnimada Federaalka, ilmahaagu wuxuu xaq u leeyahay cunto dugsiyeed bilaash ah.
Sannadkii 2019, sharci-dejinta Oregon waxa uu meel mariyey sharci si weyn u kordhinaya tirada qoysaska u qalma cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban ee dugsiga ee Oregon, taas oo qoysaska siinaya taageerada dheeraadka ah ee ay ugu baahan yihiin guusha ardaygooda.
Taas oo macnaheedu yahay, yQoyskayagu hadda waxa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan cunto dugsiyeed bilaash ah, xataa haddii aanad hore ugu qalmin! Waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato:
Iyadoo la raacayo Tilmaamaha Dakhliga La Balaadhiyay ee cusub ee Oregon (EIG), qoysaska haysta dakhliga ilaa 300% heerka faqriga ee federaalka waxay hadda xaq u leeyihiin cunto bilaash ah iyo qiimo jaban. Markii hore, qoysaska kaliya ee kasbaday ilaa 185% heerka faqriga ee federaalka ayaa u qalmay sababo la xiriira habraaca u qalmida dakhliga federaalka.
Sannad Dugsiyeedka 2021-2022 Tilmaamaha u-qalmitaanka Dakhliga
Fadlan ogow: Haddii dakhliga qoyskaagu uu gaaro ama ka hooseeyo xadka jaantuskan hoose, ilmahaagu (carruurtaada) waxay heli karaan cunto dugsiyeed bilaash ah iyada oo loo marayo Oregon EIG.
Heerka socdaalka lama tixgeliyo marka la codsanayo cunto dugsiyeed bilaash ah. Cunto dugsiyeedka bilaashka ah maaha arrin ku jirta imtixaanka kharashka dadweynaha.
Hel faa'iidooyinka kale ee federaalka
Dhammaan carruurta ku jirta qoysaska qaata dheefaha, iyadoon loo eegin qaddarka, ee ka imanaya dheefaha Barnaamijka Kaalmada Nafaqada ee Dheeraadka ah (SNAP), Kaalmada Ku-meel-gaadhka ah ee Qoysaska Baahan (TANF) ama Barnaamijka Qaybinta Cunnada ee Reservations Indian (FDPIR), waxay u qalmi doonaan cunto dugsiyeed bilaash ah.
Duruufaha kale ee u-qalmitaanka
Carruurta ka qaybgalaysa barnaamijka Head Start ee dugsigooda waxay xaq u leeyihiin cunto dugsiyeed bilaash ah. Intaa waxaa dheer, carruurta ku jirta Xannaanada Foster ama buuxiyey qeexida guri la'aanta, carartay, ama soogalootiga waxay xaq u leeyihiin cunto dugsiyeed bilaash ah. Degmo dugsiyeedka ayaa yeelan doonta xiriiriye dugsi kaas oo ka caawin doona go'aaminta marka ilmuhu ku hoos dhaco qaybtan dambe.
Qoysasku waa inay soo gudbiyaan codsi cusub si ay u helaan cunto dugsiyeedka bilaashka ah iyo qiimaha jaban sanad walba, ilaa dugsigu hore kuugu sheegay in ilmahaagu u qalmo sanad dugsiyeedka cusub. Caadi ahaan, waa Madaxa Qoyska kan buuxiya oo saxeexa codsiga. Qeexida qoyska ee codsiga cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban waa koox ka kooban hal unug dhaqaale.
Waxaad codsan kartaa wakhti kasta oo sanadka ah, ma aha oo kaliya marka aad iska diiwaan geliso bilowga dugsiga. Haddii dakhliga qoyskaagu isbeddelo inta lagu jiro sanadka ama haddii aad si ku meel gaar ah u shaqaynayso, ilmahaaga ama carruurtaada waxa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan cuntada bilaashka ah iyo kuwa la dhimay, xataa haddii aad heshay diidmo horraantii sannad dugsiyeedkaas. Sababtoo ah u-qalmitaanka qoysku waxa uu ka bedelay 185% FPL ilaa 300% FPL sharcigii dhowaa awgeed, waxaanu ku dhiirigelinaynaa qoyskaaga inay codsadaan, xataa haddii aanay ubadkaagu (carruurta) hore u lahayn.
Waxaad codsiga ku soo gudbin kartaa laba siyaabood midkood:
Iyada oo loo marayo Degmo-dugsiyeedka degmadaada: waa inaad ka heshaa macluumaadka ku saabsan codsiga cuntada bilaashka ah iyo qiimaha la dhimay bilowga sannad dugsiyeedka. Haddii aanad helin macluumaadkan, la xidhiidh xafiiska dugsiga deegaankaaga si aad wax uga waydiiso codsiga cuntada dugsiga ama booqo shabakadooda. Codsiyada waraaqaha ah ayaa laga heli karaa degmadaada iyagoo ku qoran Shiine, Ruush, Soomaali, Fiyatnaamiis, Isbaanish, iyo Ingiriis.
Iyadoo loo marayo codsiga internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Oregon (oo lagu heli karo Ingiriisi iyo Isbaanish)
U qalmidaada waa la go'aamiyay. Waa inaad ka heshaa Warqad Ogeysiinta Xaq u yeelashada ee dugsigaaga ama degmadaada taasoo sheegaysa in ardaygaaga loo ogolaaday ama loo diiday faa'iidada cuntada dugsiga ee bilaashka ah iyo qiimaha jaban. Waa inay caddahay waxa go'aanku yahay iyo sababta dugsigaaga ama degmadaadu go'aanka u gaadheen.
Ardaygaagu wuxuu bilaabi karaa inuu helo cunto dugsiyeed bilaash ah.
Qoysaska aan u qalmin inay helaan dheefta cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban ee dugsiga iyadoo lagu saleynayo dakhligooda weli waa la soo dhaweynayaa waxaana lagu dhiirigelinayaa inay iibsadaan cuntada dugsiga, waxayna bixin karaan iyaga iyagoo la xiriiraya dugsigooda.
Nuqullada codsiga(yada) warqadda ah iyo macluumaad dheeraad ah, gaar ahaan agagaarka u-qalmitaanka dakhliga, fadlan booqo Waaxda Waxbarashada Oregon boggeeda u-qalmitaanka.
Sidee u shaqeeyaa?
Ma ogtahay, dugsiyada intooda badan waxay bixiyaan barnaamijyo dhowr ah si loo hubiyo in carruurta xaqa u leh ay ka heli karaan cunto nafaqo ah dugsiga. Barnaamijyada cuntada waxaa ka mid ah:
Barnaamijka Quraacda Dugsiga (SBP)
Barnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka (NSLP)
Barnaamijka Daryeelka Dugsiga Kadib (CACFP)
The Waaxda Waxbarashada ee Oregon wuxuu maamulaa barnaamijyadan iyada oo loo marayo Waaxda Barnaamijyada Nafaqeynta Carruurta, la shaqaynta shaqaalaha nafaqaynta ee dugsi kasta. Ka qaybqaadashadu waxay u ogolaataa dugsiyada inay helaan lacag celin kasta oo quraacda, qado, casho ama cunto fudud oo la bixiyo. Bedelkeeda, dugsiyadu waxay bixiyaan cunto nafaqo leh oo buuxisa heerarka USDA.
Oregon, dhammaan carruurta u qalmi doonta cuntooyinka qiimaha jaban hadda waxay ku helayaan lacag la'aan, iyadoo ay ugu wacan tahay maalgelinta dheeraadka ah ee gobolka. Si aad wax uga ogaato meelaha u doodista dheeraadka ah ee la xidhiidha cuntada dugsiga, booqo boggayaga Dugsiyada Gaajada Xorta ah.
Ma qabtaa su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan xaq u yeelashada cunnada Bilaashka ah iyo Qiimaha La dhimay?
Fiiri Waaxda Waxbarashada Oregon Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo.